Resonance magnetic sawirka farsamoyaqaanno Job Description / Sample Duty Oo Functions - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Resonance magnetic sawirka farsamoyaqaanno Job Description / Sample Duty Oo Functions
Yacquub June 28, 2016 Uncategorized 2 Comments 1,770 Views
Shaqeeyaan resonance imaging (MRI) sawiro. La soco ammaanka bukaanka iyo raaxada . abaal gud laga yaabaa gadolinium qiyaasta la barbardhigo intravenously. On u eegista taagan hababka MRI waa, sharaxay by wareysan karaa shaqsi, iyo bukaanka meesha. geli karaan xogta computer sida dhaxal ahaan bukaanka, in lays ku qeexan, Gobolka noolaha inay noqdaan iskaan, iyo meesha Siddo.
Dheji raadraaca nafeedba u keenaysaa in suffereris gacanta, jir, waistline, ama qaybaha kale ee jidhka.
Dheellitir magnet resonance imaging (MRI) unit ama hardware durugsan.
Anshaxa wareysiga kala-soocidda dadka si loo ogaado sababo, tusaale ahaan ferrous qalabka filtarka in ay yihiin pacemakers bedalay .
Soo saaraan nuqul raad raac ah oo sawiro by rarayo muuqaallo ka computer si Kundarbetsplats ama kaydinta warbaahinta.
Dhis ama haddii kale dhigi xogta sawirka of sawirada resonance magnetic.
Sharax magnet resonance imaging (MRI) Hababka shakhsiyaadka, distributors in ay yihiin shaqsi, ama xubnaha qoyska.
Geli intravenously iska midabo, sida tusaale ahaan la barbardhigo gadolinium, iyadoo goob dhaqanka waafaqsan.
Hubi sawiro ku saabsan fiican, isticmaalka camera iyo qalabka magnetic resonance ilaalinta.
Qabtaan sawirka resonance magnetic (MRI) scanners.
Haddii la doonayo, si loo hubiyo in unugyo joojin meesha ku haboon in ay, ku lifaaqan ka cabanaya meel on qabtay.
dhego gashi Supply ama la gashto shakhsiyaadka si kor loogu qaado istareexsan oo dhawaaqa hoose in uu yahay saxariir.
Soo qaado wareegyada ama xeelado imaging ku haboon in la sameeyo sawiro in ay yihiin lagama maarmaan.
Dhibta walaac adag lala magnetic resonance imaging (MRI) akhristaha ama durugsan waxyaabaha, ay ka mid yihiin soo jeedo ama wareegyada.
Agabka iyo kuwa anshaxa si adkaysatay inay sii stock ka mid ah maaddooyinka ku jira caafimaadka.
Tali kooxda daryeelka caafimaadka ama waxbaranaya in magnetic resonance imaging (MRI) nidaamka ama habka qalabka.
Shaqeeyaan habab indhaha si ay u qabsadaan magnet awood resonance imaging (MRI) sawiro, tusaale ahaan wax ku ool ah maskaxda-imaging, -Waqtiga dhabta ah jirka mooshin-raadraaca, ama ka kooban muruqyada iyo muuqaalaynta duulimaadka.
daawada dajiyaha Baahida ama daawooyin dheeraad ah oo ka dhakhaatiir loogu talagalay dadka argagax ama cabsida.
Tixgeli diiwaanka kooban in ay yihiin caafimaadka bukaanka.
Hubi magnet resonance imaging (MRI) qalabka si ay u sameeyaan qalliinka saxda ah qaarkood iyo hufnaan la raacayo shuruudaha.
Abuur ogaysiisyada si koobaan qiimaynta hababka ama natiijo ku saabsan dhakhaatiirta ama khubaro caafimaad oo kala duwan ama warbixino.
Link kordhinaya noolaha xamili iibsiga noolaha (PAC) alaabta.
Jago iyo ilaaliyo yar, leexleexdaan magnetic resonance imaging (MRI) akhristayaasha on qayb jidhka si ay u noqdaan waxaad moodaysay, sida gacanta, jilibka, ama booqo.
Qorshaha ku saabsan arrimaha baaritaan ama macaamiisha in ay yihiin clinical.
Waxqabadka Task u Baahan
Akhrinta fahamka-Understanding ka kooban cutubyada iyo weedhaha in waraaqaha shaqada la xiriiro.
Dhagaysi-To waxa dadka kale leeyihiin bixinta dareenka oo dhan Active, waqti in la aqoonsado arrimaha qaadashada la-macmalay, weeydiin su'aalo sida fiican, oo aan ku cabirayaan at jeer in ay yihiin aan habboonayn.
Daabacaadda-hadalka si hufan oo qoraal ah ma aha sida aan habboonayn ee shuruudaha suuqa.
Sheekaysiga-ka hadlayay dadka kale in la xuso macluumaad si guul leh.
Xisaab-Isticmaalka xisaabta si uu u xaliyo arimaha.
farsamooyinka Science-Adeegsanaya iyo xeerarka farsamada si uu u xaliyo dhibaatooyinka.
Criticalthinking-Isticmaalka macquulka ah oo ku fikiray inaan ku arko faa'iidooyinka iyo duleella fursado kale ah, Natiijada ama habab arrimaha.
Learning-Fahamka muhiimadda ay macluumaad cusub oo mustaqbalka iyo hadiyad go'aan qaadashada xalinta dhibaatooyinka iyo labada Active.
Barashada Xeeladaha-qaadaaya oo isticmaala xeelado iyo hababka haboona dhibaatada wacyi educationORtutorial ama marka barashada waxyaabo cusub.
waxqabadka Monitoring-OverseeingPERDiscovering hay'adaha, qof oo dheeraad ah, ama qofka ka fiirsan tallaabo sixid ah ama si ay u abuuraan uqaadineed.
Social Perceptiveness-ka foojignaatid jawaabaha othersA oo og sababta ay u dhaqmaan maxaa yeelay, waxay sameeyaan.
Qancinta-xaadh dadka kale in la beddelo caadooyinka ama garashadoodii.
Dood-Qaadashada wada kuwa kale oo isku dayay in ay heshiiyaan kala duwanyahay,.
qaar kalena bara-aad bartid loogu taraaroxo talaabo ka qaado.
Orientation-dadaal Company isku dayaya in ay ka heli xeeladaha si loo caawiyo dadka.
Complex Lagu Xallinayo Dhibaatada-Aqoonsiga dhibaatooyin adag iyo dib u macluumaadka khuseeya hirgeliyaan doorasho iyo in ay soo saaraan iyo qiimaynta doorashada.
Ganacsi shuruudaha iyo shuruudaha wax soo saarka Research-barashada si loo abuuro style a.
qalabka ama dhalin iyo technology si ay u caawiyaan user u baahan Engineering Design-Lahaanshaha.
Tools qalab Selection-Go'aaminta iyo nooca qalabka ee loo baahan yahay si ay u fuliyaan shaqada ah.
codsiyada wajigeeda-xiridda, mashiinada, fiilooyin, ama qalabka si ay u qanciso shuruudaha.
barnaamijyada computer Barnaamij-Writing codsiyada kala duwan.
Function calls Tracking-kuurgalo, cabirrada, ama tilmaamo kala duwan si loo hubiyo in qalabka la ool ah fulinta.
Hawlgallada iyo nidaamka Control-Maamulka habab ama qalabka.
Dayactirka-fulinta dayactirka joogtada ah ee qalabka iyo go'aan marka.
Dhib-Go'aaminta arrimaha ka dambeeya qalad in ay ka shaqeeyaan iyo go'aaminta waxa la sameeyo oo ku saabsan.
qalabka ama lagu daydo dayactirka-hagaajinta isticmaalaya qalab la doonayo.
qiimaynta iyo imtixaanada waxyaabaha Quality Control-Qiimeynta-Sameynta, xal, ama hawlaha si ay u qiimeeyaan tayada ama ka shaqeynayaan.
View iyo faa'iidooyinka Go'aan-la tixgaliyo iyo kharashka u dhigma hawlaha suurto gal ah in la doorto mid ka mid ah ugu habboon.
isbedel Falanqaynta-Go'aaminta sida barnaamij shaqeeyaan waa iyo sida ay u samaynta, hawlaha, iyo sidoo kale dhibaatooyinka saameyn ku yeelan karaa natiijooyinka.
nidaamyada ama calaamadaha waxqabadka nidaamka iyo sidoo kale iyadoo la raacayo hamiga nidaamka Methods Falanqaynta-Go'aaminta, ku haboon ama ficillada loo baahan yahay in la xoojiyo waxqabadka.
Timemanagement-Xakamaynta la joogo dad kale oo ka mid ah ayaa munaasabadda u gaar ah.
Maamulka Lacagta-Aqoonsiga sida dakhli badan tahay in la bixisay in ay shaqada sameeyey, iyo iibka ku saabsan kharashyada kuwan.
Management of Product Resources-kuurgalo iyo helitaanka isticmaalka saxda ah ee muuqaalada, qalabka, iyo qalabka loo baahan yahay in la sameeyo si gaar ah u shaqeeyaan.
Maamulka shaqaalaha Resources-Abuuritaanka, riixid, oo hogaaminaya dadka waawayn, sababtoo ah waxay ku shaqeeyaan, aqoonsashada dadka ugu fiican ee aad shaqo.
Affiliate ee Stage (ama dheeraad ah shahaadada 2-sanno)
Dhowr Koorsooyinka School
In ka badan 1 sanno, A.villa 2 sano oo ay ka mid yihiin,
Shaqo Authority Skills Qualification
Hanuuninta Bulshada – %
Dulqaadanayn Stress – %
Fiiro gaar ah u Qoto – %
daacadnimo – %
Pingback: 10 Points To Consider For A Successful Resume - Xarunta Blog Australia